Abantwana bahlala behamba, bahlala bekulungele ukwenza imisebenzi ekhutheleyo: kwindawo ethile yokunyuka, ukugijima, ukuxuma, ukuzonwabisa kunye nabahlobo. Ngoko ke, iimpahla zomntwana kufuneka zikhululekile, ungabaniki abantwana abantwana, kwaye zomelele ngokwaneleyo.
Abazali abaninzi bakhetha iindawo zokuzonwabisa zabantwana babo, kuba banika umntwana inkululeko yokunyakaza ngokungapheliyo, ukunyamezela imithwalo enzima kunye nezinye izinto ezithinta iimpahla. Kodwa umzali akanakukuhluleka ukuqonda ukuba kwimeko nganye kuyimfuneko ukhetha i-suit efanelekayo kumntwana, kuba awuyi kutyhekeza umntwana ezikolweni ezikolweni kwimidlalo ye-classic, kwaye uvumele ukuqeqeshwa ngokomzimba ukuba ugqoke iingubo ezintle ngee-sequins kunye neentsimbi.
Ngoku masenze isigqibo sokuba yeyiphi imicimbi yezemidlalo eya kuhambelana nezihlandlo ezithile ebomini bomntwana, kunye nendlela yokukhetha iimpahla ezifanelekileyo kubantwana.
Imidlalo yokusebenza kwansuku zonke yabantwana.
Izambatho ukuba umntwana uhlale egqoke ukuhamba nabahlobo okanye esikolweni kufuneka abe nococeko, athembeke kwaye enhle, kodwa kungeyona nto ebalulekileyo yokhuseleko lwezixhobo ezifanelekileyo. I-tracksuit eneendibano ezininzi okanye iindophi ziza kubangela ukunqanda isikhumba okanye mhlawumbi imincinci, ngokunyakaza okubukhali. Ubukhulu be s suit buhambelana nokukhula komntwana, kodwa kuyafaneleka ukuba sicinge ngamathuba okukhula kwengane. Asiyi kucebisa ukuthenga iimpahla "ubungakanani ngobukhulu", kuba emva kwexesha le ndoda iya kuba yincinci.
Ukuba umntwana wakho usebenza kwicandelo lezemidlalo.
Ukuba umntanakho ukhetha umdlalo othile, aze asebenze nayo nayiphi na icandelo, ngoko xa ukhetha izambatho, kufuneka uhlawule ngokukodwa umgangatho wezinto zokugqoka, kunye nokusebenza kwayo. Ukwenza imidlalo kudinga ukunyamezeka komzimba kunye nokugxininisa kakhulu ekusebenziseni imiyalelo yomqeqeshi. Enye inkcazelo ebalulekileyo - akukho mzekelo akufanele igcinwe kwiingubo.
Abafundi kwimigangatho yezemidlalo.
Abantwana besikolo abaphakathi kwinqanaba eliphakathi banqwenela ukwenza iimfuno ezithile xa bekhetha iimpahla. Abantwana bafuna ukuhamba ngeempahla eziphathekayo, jonga izinto ezintle kwaye zihle. Iimveliso zehlabathi zinikezelwa kwiimodeli ukhetho olukhulu lwezemidlalo. Wonke umntu uya kukwazi ukufumana isitifiketi esanelisa iimfuno zakhe, ngelixa uya kuba yintlandlolo kwaye enhle.
Xa ukhetha iingubo zonyaka wonyaka, kukho izinto ezininzi zokuqwalasela.
Eyokuqala kubo: i- suit iqiniseke ukuba ikhululekile kangangoko kunokwenzeka kumntwana, ayikwazi ukunqanda ukunyakaza, kunye nomsebenzi omkhulu wendalo ekhulayo. Izinto zokunxiba iimpahla zenziwe zizinto ezimnandi kumgca wokuthinta, kwaye akukho nhlobo abayibhinqa. Ukuba iilebula zibukhali, iingubo eziya kuba nzima ukugqoka.
Into yesibini: iimpahla kufuneka zomelele, ukuze umntwana akwazi ukuyihambisa phambi kokuphela kwexesha. Ukuba i-suit iyimbane, ngoko kufuneka ibe namandla kwaye ixhotyiswe ngamanqwanqwa angaphezulu. I-Laces kwiziphelo kufuneka zihlanganiswe ngeengubo ezikhethekileyo. Umntwana akakwazi ukukhupha okanye ukukrazula iinkcukacha zengubo.
Into yesithathu: Izambatho ezifudumeleyo. Ekuqaleni kwexesha, imozulu ngezinye izikhathi ivelisa into emangalisa, ngoko ikiti kufuneka ibe nempahla efudumele. Ingubo kufuneka ibe nzima, ukwenzela ukukhusela umntwana emoyeni nasekudakeni. Abazali banokuthenga i-chad izingubo ze-transformer, kuya kuba lula, njengasekuqaleni kwexesha, kunye naphakathi. Iingubo ezinjalo zinethuba lokugxininisa / ukukhusela umbane ofudumeleyo, kwaye umzali uza kuzixazulula enye ingxaki encinane yokugqoka.
Into yesine. Xa uthengela iimpahla, qwalasela ukukhula okuqhubekayo komntwana. Ngako oko, kufuneka ukhethe iingubo ezi-1-2 ubukhulu obukhulu, kungenjalo kuya kufuneka uthenge iimpahla ezintsha zentsana phakathi kwexesha, kwaye unokuhlala ugoba imikhono emide kunye neepenteti. Iingubo zisoloko zinika induduzo kumntwana, kwaye akukho ntlungu xa ugqoke.
Ewe, okokugqibela kwesihlanu. Naluphi na iimpahla zomntwana kufuneka zibonakalise ubuntu bakhe, ziphakamise indlela yakhe kunye nomdla. Ukuba umntwana wakho sele ekhulile ngokwaneleyo, makhe akhethe iingubo. Emva koko awuyi kuhlangana nengxaki apho umntwana engafuni ukugqoka iimpahla.
Xa uthengela iimpahla zentsholongwane, qwa lasela imfashini, kuba bonke abazali bafuna ukuba umntwana wabo ukhangeleke ngakumbi kunabo bonke abantu. Kwiingubo ezintle umntanakho uya kuziva ekhululekile aze akwazi ukwenza ubuhlobo obutsha.
Ukhuseleko lweengubo - okokuqala! Xa uthengi, qwa lasela iinkcukacha ezincinci zengubo, zonke izitye okanye iiplastiki maziqhotyoshelweyo ngokuqinisekileyo, kuba umntwana angazinqumla okanye aziphule.
Kwimeko apho umntwana wakho othandekayo unqabileyo, kwaye uyazi ukuba uya kuhamba nawe ehleli e-stroller, ke ubeke ingqalelo kwimva yengubo. Ayinakuqulatha izibonda ezenza uxinzelelo kwimpumpo. Ukukhethwa kufuneka kunikelwe kwiindwangu ezenziwe ngezinto eziphathekayo, ukuvumela ukuba isikhumba somntwana siphefumle. Xa ukhetha i-jumpsuit okanye i-panties yomntwana wakho, qiniseka ukuba uya kukhululeka ngokwanele ukuba umntwana abeke phezulu phezulu.
Kwimeko apho umntwana wakho akhule khona, ngoko kukhetha iingubo kufuneka ziwele emathethini afudumele kunye nemibala ekhanyayo yanamhlanje. Abantwana, njengabantu abadala, banxiba ukugqoka okuqhaqhasheyo kunye nokuhle kunye nokukhazimulayo. Nceda ungawaxosheli ithuba elihle kangaka. Kuya kuba kuhle ukuba iingubo zongeza i-collar enekrele kunye nemikhono engakwazi ukunyanzeliswa. Kunyanzelekile ukuba umzekelo unomkhuhlane okhusela umntwana kwimini yamanzi entwasahlobo, xa iqhwa okanye iqhwa.
Kuya kuba kuhle ukuba yonke ixhotywe ngebhanki eqaqambileyo ekupheleni kweemikhono nemikhono, kodwa kungekhona kwimeko ye-coma ayinayo. Kuloo miqulu, umntwana uya kukhululeka, akukho nto iya kudlalwa ngexesha le midlalo, kunye ne-hoodies, ephosayo, andinakuyithatha. Kwakhona, umoya awukwazi ukungena ngaphantsi kweengubo, ukwenzela ukuba onke amathuba okugula ayancitshiswa.
Ngoku uyazi indlela yokukhetha iimpahla ezifanelekileyo kubantwana. Yaye yaqonda ukuba oku akunjalo lula, kodwa kuxhomekeke kwimpahla enomntwana kunye nentuthuzelo yengane yakho kuxhomekeke kuyo, ngoko nceda, thabatha ukuthenga kwakho ngokufanelekileyo kwaye uqwalasele zonke iimfuno zomntwana.
Ziziphi iimpahla zokuthenga umntwana osandula ebusika
Isipho sokuqala sonyaka omtsha
Isipho kumama ngezandla zam: i-daisy eyenziwe yenziwe ngeboya yekotoni
Ngumhla woBuku kaBawo eRashiya? Ndiyakuvuyela kwindinyana kunye nomyeni wakhe, uyise oyintombi
Indlela yokumisa ukuqhubela phambili kwe-myopia kubantwana
Ukuxinezeleka: ubunzima obuneminyaka engama-40 kumfazi
Indlela yokuqala ukulahlekelwa isisindo ngokuchanekileyo